Wakambobirwa here? - WebSetNet
Isu tinoratidzira iwo matipi uye maitiro iwe aunoda kukiya pasi rako rese redhijitari ecosystem.
ZVAKANAKISA windows Chengetedzo masutu
Isu tinofumura akanakisa ekuchengetedza masutu emhando dzese dze Windows vanoshandisa.
Zvese zvaunoda kuti uzive nezvekuchengetedza yako Android foni kana piritsi.
Maitiro ekugara wakachengeteka kana uchishandisa Mac yako kumba kana pane yeruzhinji Wi-Fi hotspots.
DZVANYA PASI FACEBOOK
Facebook yakanaka kugovana, asi zviri nyore kugovera - inguva yekudzora kuti ndiani anoona chii.
ZVIPAI ZVENYU KUTAURA GOGO
Maitiro ekumisa Google kubva kuteedzera yako online zviitiko.
STOP WINDOWS 10 Kuongorora
Vagadziri Gadziriso zvachinja-kumusoro Windowssarudzo dzekuvanzika zvakare, saka tinokuratidza maitiro ekuzvivharira pasi.
Chengetedza dhijitari yako ecosystem
Unonetseka nezve yako online uye isinga chengeteke uye kuvanzika?
Nick Peers anoburitsa iwo matipi uye maitiro iwe aunoda kukiya pasi rako rese redhijitari ecosystem.
Hapana zuva rinopera pasina imwe nyowani yekupokana kukakavara. Kubva pamasaiti epamhepo ari kukanganiswa nevanhu vakatarisana pasi nezvikumbiro zvehlengware, iyo inogara yakabatana nguva izere nenjodzi. Kudzivirira kunogara kuri nani pane kurapwa, saka ungaitei kuti uve nechokwadi chekuti wakachengetedzwa sezvaungave iwe?
Muchinhu ichi, isu tichakusimbisa nezvose zvishandiso, matipi uye gwara raunoda kuti uvhare musuwo wekutyaira-nevasori, malware uye zvimwe zvinotyisidzira zvepamhepo kune yako zvakavanzika uye chengetedzo. Tichatanga nekukiya PC yako - kuona kuti yako software yekuchengetedza yave kukwenya, une firewall inoenderana nechinangwa uye kuti rako data rakanyorwa uye rakaoma kuba sezvinobvira.
Tevere, isu tichatarisa kuomesa chengetedzo yepamhepo network yako - iwe uchaona maitiro ekupinda kune yako router, kugadzirisa kuchengetedzeka kwewe Wi-Fi network uye kudzora kupinda kune izvo chete izvo zvishandiso iwe zvaunosarudza zvakajeka. Isu tinokuratidzawo maitiro ekuita nekukurumidza chengetedzo kutsvaira kwako isina waya tekinoroji uye kuitarisa kune isina kusimba nzvimbo.
Zvino zvave kune yako internet kubatanidza - iwe unozodzidza kunyorera kubatana kwako uchishandisa VPN, kunyangwe kana uchitsvaga munzvimbo dzeveruzhinji, uye uwane maitiro ekuita mukuchengetedza webhu kwakachengeteka, email uye kunyange kutaura. Chekupedzisira, asi chisiri chidiki, iwe unodzidza maitiro ekushandisa zvisina musoro - uye isina mvura - manejimendi manejimendi manejimendi kuona kuti une yakasarudzika, yakasimba mapassword pasina kuita kuti zvinhu zvinyanye. Tichatokuratidza maitiro ekuchinjisa maviri-echinhu chokwadi chekudzivirira kwakanyanya.
Tevedza aya matipi uye iwe unokiya kunze kwevanobiridzira nevanoba, uye chengeta yako yega data seyakavanzika uye yakachengetedzwa sezvazvingaite. Yenguva yekurwa.
Chengetedza rako gore backups
Kana iwe ukachengeta data kune iro gore, iwe unogona kuve unonetseka nezve kuchengetedzeka kwaro.
Vese vanopa gore vanovimbisa kunyorera data rako kuitira zvakavanzika, asi nderupi rudzi rwekunyorera rwunopihwa, uye kiyi iripi kiyi dzinodikanwa kutsikisa dhata rako rakachengetwa? Kana iwe uri paranoid zvachose, iwe uchazoda iwo makiyi akachengetwa mune yako wega, maitiro anozivikanwa sevatengi-padivi kunyorera. Zvinosuruvarisa, havazi vazhinji vanopa gore vanopa vanopa izvi - kana Dropbox kana OneDrive hazviite, semuenzaniso.
Kana uku kuri kunetsekana, unogona kunyorera data rako munharaunda usati waisa kune iro gore - kana uri kutoshandisa VeraCrypt, semuenzaniso, unogona kungogadzira vhoriyamu yakavharidzirwa mukati mekamuri rako dura uye chengeta data rese rakaomarara imomo. Kune rimwe divi, kana iwe uchinyanya kushandisa yako gore rinopa kuti uenzanise data pakati pemidziyo yako yakasiyana, unozofanirwa kusarudza mhinduro inoita kuti iwe uwane data rako pane chero mapuratifomu aunoda.
Kune dzakawanda sarudzo kunze uko, asi imwe isina muganho uye yemahara yekushandisa wega ndeyeNCrypted Cloud (www.encryptedcloud.com/apps/windows). Kana uchinge waiswa, seta yako yemahara nCrypted Cloud account, wobva wabatanidza vanopa gore (Dropbox, OneDrive, Bhokisi neGoogle Drive zvese zvinotsigirwa) uye pakupedzisira sarudza maforodha aunoda kunyorera. Kana iwe uchida kuwana kubva kumamwe makomputa kana nhare mbozha (Mac, iOS uye Android zvinotsigirwawo), saka ingoisa inoenderana app kana chirongwa, ubatanidze kune yako NCrypted Cloud account uye wapedza.
Simbisa yako Windows chibatiso
Nhanho yekutanga mukudzivirira imba yako inotanga neako PC.
Ngatitangei nekusimbisa kuchengetedzwa kwemakomputa mumba mako. Kutanga, tarisa pane yako software yekuchengetedza.
Kana urikushandisa izvozvi Windows Defender, tinokurudzira kuti uchinjire kune chimwe chinhu chakasimba.
Kana iwe uchifara kuvimba nedziviriro yemahara, ipapo Avira Yemahara Security Suite (www.avira.com) isarudzo yakanaka kwazvo. Icho chakareruka pamakumbo ayo, chiri nyore kushandisa uye chinokupa chengetedzo inoenderana nezvakawanda zvigadzirwa zvekutengesa. Inosanganisira anti-malware, system tune-up, yegore-based password maneja, kubhurawuza kwakachengeteka, vhoriyamu-yakatemwa VPN, webhu uye yekutsvaga firita, pamwe neye software yekuvandudza yekutarisa. Uyezve, unogona kubata akawanda madhijitari kubva kune imwechete desktop. (Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa kuongorora kwedu kuzere papeji 58.)
Kubhadharwa-kwekudzivirirwa kubva kune izvo zvinofarira zveKaspersky, Symantec neNorton zvinotopfuura, uye iwe unogona kuwana zvidzikiso nekutenga marezinesi mazhinji emakomputa kuvhara imba yako yese. Kana uchidzika nenzira iyi, chengeta ziso rako kuitise madhiri - unogona kuzvitenga chero nguva yegore, wozozvishandisa kana kunyorera kwako kwapera.
Chengetedza MOTO WAKO
Kana iwe ukafunga kushandisa yemahara chengetedzo, unenge uchivimba ne Windows Firewall. Iyo ine maturusi ese aunoda kuti uvhare musuwo kune vanobiridzira, asi haishandise zvizere. Windows Firewall monitors irikuuya traffic kubva kunetiweki yako neinternet yezvingangotyisidzira, asi mafungu kuburikidza neyese inobuda traffic kubva kunyorera pasina rwechipiri kufunga.
Kana iwe usina wechitatu-bato firewall yakaiswa, ipapo TinyWall (tinywall.pados.hu) inokupa iwe nzira yekushandisa Windows Firewall senzira mbiri firewall. Chokwadi, zvinoda zvishoma zvekugadziriswa kuti zvishande, asi gwara-nhanho-nhanho gwara pane rakatarisana peji rinoratidza zvese. Caveat chete ndeyekuti zvinogona kutora imwe nguva software yako yese isati yashanda nemazvo - tarisa kunze kwekutadza kuvandudzwa uye kunyorera kunetseka pamusoro pekushaya mukana wakakwana. Kana iwe uchiziva uye uchivimba iyo app iri mubvunzo, ingo tevera iyo gwara yekuwedzera kune iyo TinyWall's whitelist.
Ziva zvakare nyaya dzinogona kuitika nekugovana mafaera uye maprinta nevamwe vanhu - unogona kushanda uchitenderedza mazhinji acho, asi kana zvanyanya kunetsa, tsvaga yakabhadharwa-mhinduro panzvimbo.
“Kana ukafunga kushandisa chengetedzo yemahara, unenge uchivimba ne Windows Firewall. Iine maturusi ese aunoda kuti uvhare musuwo kune vanoba mari, asi haaishandise zvizere. ”|
Wedzera ZVIMWE ZVINODZIVIRIRA
Chero chero chengetedzo software yawakaisa, panogara paine mukana wekuwedzera rubatsiro. Unogona kutanga nekuisa Malwarebytes Anti-Malware Mahara (www.makemware.org), Iyo inogona kudzura uye kubvisa hutachiona hwakarasikirwa neako makuru ekuchengetedza software.
Iyo yemahara vhezheni inofanira kushandiswa kuongorora yako system kanokwana kamwe pasvondo, kana kubhadhara iyo Premium vhezheni yeicho chaicho-nguva chengetedzo (pasina kupokana nechero yeako mamwe ako ekuchengetedza maturusi).
Kana yako yekuchengetedza software isingape chero dziviriro kubva kuwareware, wobva waisa BitDefender Anti-Rudzikunuro Chishandiso (www.bitdefender.com/solutions/anti-rhlengware-tool.html) kuvharira ina dzinozivikanwa mhuri dzerudzikunuro. Rudzikunuro rwakanyanya kushata malware inonyora rese data pane rako rakaoma dhiraivhi, ichikumbira kuti ubhadhare rudzikunuro rwakakomba kudzosera kiyi inodikanwa kuti ikiyinure - iyo zvakare inovimba nekutendeseka kwemutadzi ari kumashure kwayo. Imwe nzira yekuzvidzivirira ndeye kugara uchitsigira yako data zvese zviri kure (iro gore) uye onsite (yekunze hard drive).
DZIVIRIRA DATA RAKO
Faira rako pachako rakakosha, asi zvakare ane hunyanzvi. Kana iwe uri mushandisi weLaptop anotora PC yavo munzira, iwe unofanirwa kuzvibvunza iwe kuti waizonzwa sei kana laptop yako ikabiwa. Mhinduro ndeyekunyorera mafaera ako, uye izvo zvinogona kuitwa nenzira dzinoverengeka zvinoenderana nekwakachengetwa data.
Kana iwe uri akatakura mafaera pane USB chigunwe dhiraivha, iyo iri nyore nzira ndeyekugadzira yakavharidzirwa 'mudziyo' mauri iwe waunoisa ako akaomarara mafaira. Mudziyo unodzivirirwa neshoko - kuendesa iro rakakodzera password kuvhura mafaera mukati seyakajairika dhisiki dhiraivha, asi zvikasadaro, ivo vanoramba vakavanda uye vachikwenya.
Kana nzira iyi ikakwidza, tarisa Rohos Mini Drive (www.rohos.com/products/rohos-mini-drive). Izvi zvinokutendera kuti iwe ugadzire chaiwo madhiraivha kusvika ku8GB muhukuru mahara.
Kana iwe uchida kunyorera mushini wako wese, saka Windows 10 Vashandisi vehunyanzvi vanofanirwa kunyora "bitlocker" mubhokisi reKutsvaga kuti uone mashandisiro Windows'pachake encryption chishandiso. Kana iwe uchimhanya Windows 10 Imba, wozoshandisa VeraCrypt (veracrypt.codeplex.com). Unogona kuishandisa kuti ugadzire yakavharidzirwa mavhoriyamu enzvimbo-yakachengetwa dhata kana kunyorera makombi ese uye zvikamu - ona iyo 'System Encryption' chikamu cheVeraCrypt zvinyorwa.
Kiya pasi network yako
Mira vabiridzi uye vanoziva kubva pakuwana yako router.
Kunyangwe iwe usati wagamuchira iyo pfungwa yeiyo smarthome, mikana iwe unenge uine huwandu hwezvigadzirwa, pamwe nePC yako, uchikwikwidza bandwidth pane yako imba network. Verenga pamusoro kuti uone maitiro ekuderedza kusagadzikana kwayo neyemumba network chengetedzo odhita.
KIYAI ROUTER YAKO
Ngatitangei nepagedhi pakati peimba yako neinternet. Kana usati wakamboita admin pane yako router zvisati zvaitika, ipapo uchawana nzira dzekusimbisa kuchengetedzeka kwaro. Iwe unogona kazhinji kubata yako router kuburikidza newebhu webhu yako nekupinda ayo mana-manhamba IP kero mune Kero Bar. Kuti uite izvozvo, tanga wavhura 'Zvirongwa> Network neInternet' wobva wadzvanya 'Wona yako netiweki zvivakwa', wozo nyora kero ye router yako IP kero pasi peDefault Gateway.
Dzivirira data reLaptop yako kubva mukuba nekunyora kwayo yose yekuchengetera mota
Nyora iyo IP kero mubrowser yako, uye iwe uchaona ikozvino chinzvimbo kana rekupinda peji. Imwe neimwe router inobata zvinhu nenzira dzakasiyana, asi ivo vese vanotevedzera zvakajairika maitiro. Tarisa zvinyorwa zvaro, tarisa pane iro bhokisi rebhokisi kana kushanyira webhusaiti yayo yekutsigira kuti uwane iyo yekumira yekutumira kuti uwane mukana.
Izvo zvinokwanisika kuti vatyairi-nevanosevha vatarise ma routers ari kure, kuvimba nevashandisi vakasiya password yekumisikidza panzvimbo, saka kana zvirizvo pane yako router, iwe unofanirwa kutsvaga sarudzo yekuchinja izvi - pane yedu TP-Link router iri pasi 'Sisitimu Zvishandiso> Manage Kudzora', asi mamwe ma routers achasiyana. Ona peji 52 yezvishandiso zvinogona kubatsira iwe kubatsira kugadzira rakasimba password.
DZIVIRIRA WI-FI YAKO
Kamwe iyo password password yashandurwa, inguva yekusimbisa yako Wi-Fi network. Router yako inofanira kunge yatove yakaisa encryption (WPA2-PSK ine AES encryption zvakanaka), asi izano rakanaka kushandura default password. Ehe, uchafanirwa kubatanidza zvese zvako zvisina waya, asi iwe unobva wabvisa chero madhizaini asina mvumo angave aishandisa pasina ruzivo rwako. Kana iwe uine akapatsanuka 2.4GHz uye 5GHz network yakamisikidzwa, dzokorora kune ese ari maviri (uye funga kumisikidza akasarudzika mapassword kune yega yega yoga network)
Komputa yega yega kana chishandiso pane network yako inozivikanwa ichishandisa kero yayo yeMAC, kodhi ine manhamba matanhatu hexadecimal.
Kana yako router ikatsigira MAC kusefa, zvinoreva kuti iwe unogona kukiya yako isina waya netiweki kunyangwe, nekutambira chete kubatana kubva kumidziyo ine chaiyo MAC kero.
Kutanga, iwe unofanirwa kuziva iyo MAC kero kune yega yega kifaa yauinayo, iyo yatinokurudzira kuti unyore pasi uye unyore pane imwe nzvimbo yakachengeteka. Iwe unozofanirwa kutarisa kumusoro mirairo kune yako chaiyo kifaa, asi inowanzo kuve iri pasi peZisarudzo kumwe kunhu. Muchiitiko chePC yako isina waya isina waya, tarisa pasi pe 'Zvirongwa> Network neInternet> Tarisa yako network zvivakwa' muchikamu chePhysical Address (MAC).
Paunenge uchinge wawana ese MAC kero iwe aunoda - kusanganisira, zvakanyanyisa, yako isina waya PC kana zvichibvira - gonesa MAC kero kusefa uye isa iwo adhi imwe neimwe. Kana ukakurudzirwa, sarudza sarudzo yekungobvumira zvishandiso zvine MAC kero zvinoenderana.
Kana iwe uchigara uchibvumira mhuri neshamwari kuwana yako yeWi-Fi network, zvichigonesa MAC kesefa kusefa ingave iri danho rakanyanya kure. Izvo zvakati, ongorora yako Wi-Fi marongero etaera kuti uone kana ichipa muyenzi network basa - kana zvikadaro, iwe unogona kupa vashanyi mukana wekupinda pasina kuvhura iyo yese network yako kwavari. Ita shuwa kuti iwe unogonesa iyo WPA / WPA2 encryption sarudzo kune yevaenzi network, uye gadza yakasarudzika isina waya password kuti vashanyi vako vashandise.
Mamwe magadzirirwo ekuchengetedza
Zvishandiso zvako zvinobatana neinternet uchishandisa akateedzana emachiteshi akasarudzika, ane madoko akasiyana anoshandiswa nemaapplication akasiyana uye masevhisi.
Zvimwe zvakaenzana - semuenzaniso, chiteshi 80 chinopa kubatana kune webhu, nepo chiteshi chengarava 25 chishandiswa neSMTP maseva eemail - asi mamwe anogoverwa pane yekushandisa-ne-application hwaro (kana iwe uchida kuwana yako Plex Media Server pamusoro peinternet. , semuenzaniso, iwe unofanirwa kubatana kuburikidza nechiteshi 32,400).
Munguva yakapfuura, iwe waifanira kuvhura manenji nemaoko kuburikidza neyako setaiti yekushandisa, asi nekuda kwekuuya kweUniversal Plug uye Play (UPnP), maapps anogona ikozvino kutaurirana nesimba ne router yako uye kuvhura madoko avanoda kumashure.
Nepo zvirinyore, izvi zvinovhura yako router kune angangoita kutyora (malware inogona kuvhura madoko ekukuvadza, semuenzaniso). Iwe unofanirwa, kana zvirinani, tarisa nguva nenguva kuti uone kuti ndeapi maapplication anowana kune yako router uye kana iwe usinga zive chero, dzivisa iyo nekukurumidza kuvhara ese madoko.
Iwe unogona ipapo kuongorora iyo isinganetseke app uchienderera mberi uchishandisa iyo IP kero kunongedza chishandiso chairi kutanga kubva usati wafunga kuti kana kwete iwe unofanirwa kuigonesa zvakare.
Maitiro ari nani - kana zvichinyanyoita nyore - ndeyokumisikidza manyore kuzvitumira pachako. Zvirongwa zvinofanirwa kukuzivisa kana izvi zvichida kuitwa, uye iwe unogona kutevedzera nhanho-nhanho gwara pazasi peji rino kuti uone kuti ndeupi ruzivo runoda kumisikidzwa pachiteshi chimwe nechimwe.
Chinhu chekupedzisira: tarisa yako webhusaiti rutsigiro webhusaiti kuti uone kana paine firmware inogadzirisirwa zviripo. Izvi zvinogona kuwedzera zvimwe zvinhu, asi zvinogona zvakare kunge zvine zvekuchengetedza zvigadziriso. Kuisa inogadziridza kazhinji kunosanganisira kurodha pasi yekuvandudza faira kuPC yako, wobva waiisa nemaoko kune yako router's yekumisikidza utility iko kwazobva yaiswa. Ive neshuwa yekudzorera kumashure kana kurekodha marongero ako usati wadaro, kana iyo yekuvandudza ikaapukuta.
"Unofanirwa, kana zvirinani, ongorora nguva nenguva kuti uone kuti ndeapi maapplication anokwanisa kuwana yako router uye kana iwe usingazive chero, zviregedze nekukurumidza kuti uvhare zviteshi zvese."
Dzivirira pamba network kit
Iwe wakasimbisa marongero ako e-router, asi zvakadiniko nemidziyo yakabatana kunetiweki yako?
Iko kukura kweiyo smarthome tech kunoreva akawanda akawanda mawaya asina waya ave kutaurirana pamusoro peinternet, saka ita shuwa kuti izvi zvakavharirwa pasi, futi. Tichakuratidza mashandisiro aungaita mapassword akasimba uye zvimwe zviyero zvekuvhara pasi chero maaccount escreen skrini pane peji, asi iwe unofanirwa kutarisa kune firmware zvidzoreso zvinogona kubatsira kuvhara zvidziviriro zvekuchengetedza.
Kana iwe uine webcam yakanamatira kune yako PC, ita shuwa kuti haisi munzvimbo iyo yaungashandiswa kukusora iwe. Ramba uine ziso pachiedza chechiedza - chinofanira kungovapo paunenge uchichiishandisa. Kana iyo kamera iri USB modhi, funga kuiburitsa iyo kana isiri kushandiswa kana kuti kuvhara bhenekeri, saka kunyangwe kana ichikanganiswa, haizoone chero chinhu. Kana iwe ukashandisa chengetedzo kamera, chengetedza iyo ine password yakasimba uye gumira uyo anokwanisa kuwana. Iwe unofanirwa zvakare kushandura pazviziviso zvaro kuti uve nechokwadi chekuti unonyeverwa pese pazvinoshandiswa.
Kana iwe uchida kuona izvo parizvino zvakabatana neinetiweki yako yekumba - zvinogona kukugonesa kuona vanoona kana vabiridzi - dhawunirodha uye unomhanya Advanced IP Scanner (www. Advanced-ip-scanner.com). Ichanyora ese aripo anoshanda network zvishandiso. Shandisa iyo Mugadziri munda kuti ubatsire kuziva zvisingazivikanwe zvishandiso kana zita racho risingakupe chero zvinongedzo, uye ramba uchiongorora nguva nenguva.
Vhura madoko nemaoko.
1 TARISA KUTAURA ZVINODIWA ZVINODZIDZISWA NOMUDZIDZO
Chero Anwendung pakombuta yako (kana chimwe chishandiso) chinoda kupinda paInternet chinofanira kujekesa zvaunofanira kuita kuti uzarure kupinda kwachiri. Iwe unofanirwa kutanga nekutarisa mukati mechirongwa chega marongero kuti uone kwaunotarisa kuti ndeapi madoko aanoda uye nhanho dzaunoda kutevedzera kuti dzishande.
2 set static ip kero
Kana usati watoita saizvozvo, uchafanira kuseta iyo static IP kero yeiyo kifaa chiri kuita application. In Windows 10, iwe unofanirwa kuteedzera gwara kune portforward.com/ networking / static-ip-windows-10. htm. Ita shuwa kuti iwe unopa chishandiso IP kero iyo isingapesane neyako router DHCP server.
3 Wedzera ADT chiteshi
Wakashongedzerwa nemirayiridzo yakapihwa mukati kubva kune saiti muChitatu 2, tsvaga chikamu chekutungamira chengarava chako chekumisikidza router Zvino gadzira chiteshi chitsva, uchipinda nhamba yechiteshi munzvimbo mbiri dzechiteshi uye kero yeIP yako yedhijitari mune iyo Kero kero. Dzvanya Sevha kana Bvumira kuti uedze kubatana uye uone kana iri kushanda nemazvo.
Simbisa zvakavanzika uye chengetedzo kana uchishandisa internet.
Iye zvino ngatiitei kuti yako internet yekubatana ive yakachengeteka, kutanga neDNS server yako. Izvi zvinoshandiswa kududzira mawebhu kero kune avo chaiwo IP kero. Kazhinji, yako DNS server inopihwa neIPP yako, asi haisi sarudzo yakanakisa yekuita uye zvikonzero zvekuchengetedza. Dzimwe nzira dzakadai seOpenDNS dzinokurumidza, dzinovimbika uye, zvakanyanya, shandisa mamwe macheki ekuchengetedza mawebhusaiti. Uine OpenDNS, unogona kusaina pawebhusaiti yayo (www.opendns. Com) yezvinhu senge kudzora kwevabereki uye kuchengetedzwa kwekuba chitupa.
Neimwe nzira, pinda mukati kune yako router, tsvaga panochengeterwa marongero eDNS, uye wozoachinjira kumakero anotevera: 208.67.222.222 uye 208.67.220.220. Mhedzisiro yacho ichave nekukurumidza. Kana iwe ukarasikirwa nehukama hwako, tarisa kuti wakavawedzera nemazvo.
Kana iwe uine chero zvishandiso zvaunoshandisa kure nekumba, unogona kushandura marongero avo eDNS kuita OpenDNS, futi - mune kesi ye Windows 10 PC, iwe unofanirwa kutaipa "network" mubhokisi reKutsvaga wobva wadzvanya 'Wona network kubatana'. Tinya kaviri kupinda kweadapter yako uye tinya Properties, wobva wasarudza 'Internet Protocol Shanduro 4 (TCP / IPv4)' wobva wadzvanya Properties. Sarudza 'Shandisa anotevera DNS server kero' uye nyora 208.67222.222 uye 208.67.220.220 mumabhokisi maviri, wobva wadzvanya OK.
KUDZIDZISWA KWEMAHARA KWEMAWANDA
Paunenge uri kuenda, zviri kuyedza kubatana kune chero yeruzhinji isina waya hotspot, kunyangwe idzo dzisingakubvunze password. Dambudziko nderekuti, idzi dzinowanzo kuvhurika zvizere, zvichibvumira chero munhu kuti akuteerere. Ndipo panouya VPN.
VPN inogadzira 'mugero' kuburikidza netiweki yeruzhinji, iyo inoita kuti iwe ugone kubatana neinternet, netraffic yese kuenda nekubva kuchinhu chako.
encrypted. Kana iwe uchingoda kutarisa webhu, isa iyo Opera webhu bhurawuza (www.opera.com), iyo inosanganisira yayo VPN. Tsvaga iyo bhatani reVPN mune yako Kero Bar (iwe unogona kuitisa iyo kuburikidza 'Menyu> Zvirongwa> Zvakavanzika & chengetedzo'). Dzvanya pairi, penya switch ku 'On' kunyorera yako yewebhu kubhurawuza. Kana iwe uchida kuwedzera VPN rutsigiro kune yako ese network traffic, mhinduro iri nyore ndeyekuisa CyberGhost VPN (www.cyberghostvpn.com), iyo inogona kunyorera kubatana kwako kwese. Iyo yemahara vhezheni haina muganho, asi inononoka - bhadhara iyo US $ 10.99 pamwedzi mubhadharo wekukurumidza kuita.
ZVIMWE ZVINOKOSHA WEB Browsing
Indaneti yako inogona ikozvino kuchengeteka, asi iwe unogona kuita zvakawanda. Opera inouya neyayo yakavakirwa-mukati ad blocker, iyo inogona kukubatsira kudzivirira kushambadza pamwe ne malware, asi kana uri kushandisa imwe browser, isa iyo Adblock Plus plugin panzvimbo.
Iri zvakare zano rakanaka kubatanidza zvakachengeteka kumawebhusaiti kana uchikwanisa, uchishandisa iyo 'https: //' protocol pane kusachengeteka 'http: //' imwe. Kurangarira izvi kunonetsa, saka isa yakavhurika-sosi Smart HTtPs yekuwedzera, uye ichaedza kubatana zvakachengeteka.
Hafu yekunyengera kwekugara wakachengeteka pamhepo iri mukudzivirira mawebhusaiti asina kunaka. Nepo mabhurawuza ewebhu akangwara pakuona uye kukutsausa kubva kumasayiti anozivikanwa kuva nenjodzi, panogara paine mukana wekuvandudza. Tarisa izvo zvishandiso zvewebhu-kusefa software yako yekuchengetedza inopa muchimiro chebrowser bar uye uishandise kutsvaga webhu pane Google.
Saizvozvo, chenjera nekurodha pasi software - tora kubva kune inozivikanwa webhusaiti uye tarisa iyo faira neyako anti-malware chishandiso usati wamhanya nayo. Chenjerera zvakafanana nebrowser add-ons - ongorora imwe neimwe usati waiisa, uye nguva nenguva tarisa kuti ndeapi mawedzero akaiswa, uchibvisa chero yausingachade kana kuziva.
Iyo yakafanana nyaya ine email. Dzivisa kudzvanya chero ma link uye wobva wanyora iyo URL muwebhu browser yako zvakananga kuti uve nechokwadi chekuti unoguma waenda kwaunofunga kuti unofanirwa. Iwe unofanirwa zvakare kuverenga mameturu eemail usati waavhura, uye shandisa masevhisi ezvekushandisa senge Mailwasher (www.mailwasher.net) kana PopTray (www.poptray.org) kutarisa mameseji vasati vagara.
E-mail mumwe munhu akafanana nekutumira kadhi-chero munhu anogona kuriverenga. Kana iwe ukashandisa Thunderbird, tarisa nhanho-nhanho gwara kuti uwane maitiro ekunyora email.
Iwe unowanzo gara uchikurukura kuburikidza nekukurumidza mameseji maapplication akadai seSkype?
Kunyange ivo vachigona kunakidzwa kwazvo, nhau dzakaipa ndedzekuti Skype, kunyanya, haina kuchengetedzeka. Kana iwe uchida yechokwadi kumagumo-kusvika- kumagumo kunyorera kwezwi, vhidhiyo uye zvinyorwa-zvakavakirwa machats (pamwe nekuchengetedzeka kwefaira kugovera), ipapo uchafanirwa kutarisa mukushandisa imwe mhinduro.
Chengetedzo yatakanyanya kuwana ndeyeRetroshare (www.airarabia.net). Chinobata chete ndechekuti uchafanirwa kugonesa vese vaunosangana navo kuti vashandise, zvakare - kana ichi chiri chibvumirano, tarisa Jitsi (jitsi.org), iyo inotsigira akati wandei akasiyana mameseji mapuratifomu.
Iwe unogona kuisa Retroshare (sarudza iyo QT5 vhezheni kana iri papeji rekurodha pasi) kune yako huru PC yekuchengetera mota kana kuimhanya seye inotakurika application, wobva wamisa account yako uye tora yega yega contact kuti iite zvakafanana. Iwe unobva watumira kunze chitupa mafaera ekutumira kune wega wega wekubatana usati waunza yavo faira mukuchinjana Ratidza nemucherechedzo wekuti 'Simbisa shamwari (Saina PGP Kiyi)' kana iwe uine chivimbo nekuzivikanwa kwavo, saka mirira apo Retroshare's Connection Mubatsiri achimisikidza kubatana.
Iyo fiddly maitiro ekuti iko kwekutanga kubatana kumiswe (uye iwe unofanirwa kuidzokorora kune yega yega chishandiso iwe chaunoisa Retroshare pa uye kupinza chako chiziviso mukati), asi kana mese mese mave musimbiswa uye kwakabatana kune imwe, munogona kuchengetedzeka mu ruzivo kuti nhaurwa dzeramangwana hadzina kungonyorwa uye kuchengetedzeka kubva kune asingadiwi evesdropper, asi kuti iwe unonyatso ziva wauri kutaura naye.
Nzombe kumusoro ako mapassword
Maitiro ekuvhara pasi ako epamhepo uye ekunze maakaundi.
Iwe unovimba nenhamba shoma yemapassword ekuchengetedza maakaunzi ese ari maviri online uye kure? Hausi wega.
Chokwadi chinosuruvarisa ndechekuti, izvi zvinomiririra mukana wevabibwi uye mbavha dzekuzivikanwa avo, kana vangobvarura rimwe remaphasiwedi ako, vanogona kuvabaya vese.
Nzira yekugadzirisa dambudziko iri kugadzira akasarudzika, mapassword akaomarara eakaundi yega yega yaunoshandisa, uchishandisa musanganiswa wemavara epamusoro uye epasi, manhamba uye kunyange zviratidzo. Icho hunyengeri ipapo ndechekuvarangarira vese.
Mhinduro yacho irimo pakushandisa masevhisi e password password.
Chinhu chakanaka chekushandisa password chinogadzira mapassword akasimba akasarudzika, zviite kuti zvive nyore kuwana uye kuvadzivirira vese kuseri kweimwe chete, yakasimba tenzi password yaunogona kurangarira. Iwe unopinda mune iyo password maneja neiyo master password, uye mamwe ese mapassword ako anobva aripo.
Kana iwe uchinetsekana zvakanyanya kana kunyangwe uchifunga nezvekuchengeteka, iwe uchazoda kuchengeta mapassword ako pasiri pamhepo, mune iyo mamiriro iwe unofanirwa kutarisa KeePass (keepass.info). Zvese zvakachengetwa munharaunda, uye iwe unogona kuwedzera imwe yekuwedzera dziviriro kune ako mapassword nekukiya iwo uchishandisa zvese tenzi password uye kiyi faira, iyo yaunochengeta pane yekunze dhisiki kana dhiraivha.
"Chishandiso chakanaka chekushandisa password chinogadzira mapassword akasimba akasarudzika, zviite kuti zvive nyore kuwana uye kuvadzivirira vese kuseri kweimwe chete, yakasimba tenzi password yaunogona kurangarira"
Inotakurika zvakare, kuti ugone kuchengeta zvese pane USB chigunwe dhiraivha uye tora mapassword ako newe kuenda kune mamwe makomputa.
Kukanganisa kukuru neKeePass, zvisinei, ndekwekuti zvinongoshanda paPC yako - kana iwe uchida kuwana mapassword ako pane nharembozha yako, semuenzaniso, ipapo uchafanirwa kuve unokwanisa kusvikwa nemuchina wako kuti uzviwane. Kana iwe uchida kuchengeta mapassword ako mugore (yakavharidzirwa, zvirokwazvo), imwe nzira iri nyore kushandisa chishandiso chakadai seLastPass (www.lastpass.com).
LastPass inopa yakafanana ficha yakaiswa kuna KeePass, kubvisa iyo kiyi faira sarudzo. Panzvimbo pezvo, izvo zvainokupa zviri nyore - unogona kuisa maapps pane ako mafaera (kusanganisira emafoni) uye shandisa mabhurawuza plugins kuti zvive nyore kupinda mumasayiti - ona gwara pane peji rinopesana - pamwe nekugadzira yakasimba, isina kujairika mavara echivande emaakaundi matsva. LastPass inoshanda nechero sevhisi iwe yaunowana kuburikidza newebhusaiti yako, ichiita kuti ive yakanaka kune yako router, pamwe nemaseva anowanikwa munzvimbo dzakadai sePlex.
LastPass inopawo zvakachengeteka manotsi uye mafomu ekuzadza maturusi, ekuchengetera rumwe ruzivo rwakanyanya Iwe unogona zvakare kubvunza LastPass kuti ikukurudzire iwe kune yako tenzi password chero nguva iwe paunovhura inonyanya kunetseka katsamba. Izvo zvakare zvinosanganisira chengetedzo odhitaiti, iyo inotarisa ako ese mapassword kune asina kusimba, zvakapetwa, mapassword iwe ausina kumutsiridza mune imwe nguva uye kunyange maakaunzi anozivikanwa kuti akave akaiswa panjodzi.
Zvese izvi zvinoshanda - kusanganisira kuwiriranisa pane nharembozha nedesktop - izvozvi mahara zvachose. Simudzira kuLastPass Premium package (US $ 24 pagore) kune zvimwe zvinhu, seLastApp - chishandiso chekushandisa LastPass pamwe chete nemaapplication kana mapurogiramu pafoni yako.
Maviri-chinhu chechokwadi uye chechipiri-chekuita chiratidzo chekuwedzera chinowedzera chekuchengetedza, nekutarisa kwako kuona uchishandisa nharembozha.
Kunyangwe iro password rakasimba rinogona kufungidzirwa kana kutsemuka, saka chii chinoitika kana password yako yaburitswa? Mhinduro ndeyekushandisa-nhanho yekusimbisa kana maviri-nhanho chokwadi. Izvi zvinowedzera imwe nhanho kana uchipinda mumaakaundi makiyi (kusanganisira LastPass) pane zvishandiso zvitsva. Izvi zvinogona kuve zvakapusa senge email ziviso, kana iwe unogona kushandisa mhinduro inoda kuti nharembozha yako kana piritsi rive padyo.
Iyi sarudzo yekupedzisira ndiyo yakanakisa, nekuti iwe unozoda mukana wemuviri kune yako nharembozha kuti uone chikumbiro. Pano, iwe unogona kusarudza kugamuchira kodhi kuburikidza nemeseji meseji, kana iwe unogona kuisa yakasarudzika yekusimbisa app iyo inogadzira makodhi pasirese ayo akasungirirwa kuaccount yako. Kana iwe uri kushandisa LastPass kuchengetedza mapassword ako, isai yemahara LastPass Authenticator app kuti upe aya makodhi - kwete chete iwe unogona kungo shandura pazvinhu zviviri-chechokwadi chevhisi uye maakaundi anoitsigira, asi iwe unogona kuibatidza kuLastPass, zvakare, ichiita kuti ive yakachengeteka zvakanyanya.
Iwe unogona kuziva kana sevhisi yako yaunosarudza inotsigira zviviri-chinhu chechokwadi nekupinda mairi uye kuongorora chikamu chekuchengetedzeka cheayo marongero - Vashandisi veLastPass vanofanirwa kupinda muaccount yavo pa www.lastpass.com uye enda ku 'Akaunti Zvirongwa> Multifactor Sarudzo', semuenzaniso. Kubva pano, unogona kuzvibatanidza neyemahara LastPass Authenticator app.
Mamwe masevhisi anoita kuti zvive nyore kuwedzera akawanda-factor kusimbiswa uchishandisa LastPass Authenticator (kana iwe uchikwanisa kuona chirevo chakajeka pairi, wobva wasarudza Google Authenticator sarudzo) nekukupa iwe QR kodhi kuti utore muLastPass Authenticator uchishandisa kamera yako mbozhanhare, izvo zvinobva zvango wirirana account yako neapp.
Zano rimwe rekuwedzera chengetedzo: chii chinoitika kana yako smartphone kana piritsi zvikabiwa? Ita shuwa kuti wabaya Zvirongwa muLastPass Authenticator uye flick iyo 'Shandisa PIN Kodhi' chinja ku'On 'kuti uichengetedze ine PIN-nhanhatu-PIN. Uye ramba uchingwarira nezvikumbiro zvisingatarisirwi zvekushandisa iyo yechokwadi app - zvinogona kuratidza kuti mubiridzi ane password rako uye ari kutarisira kuti unogona kubiridzirwa kuti uone chikumbiro chavo chekuwana.
Mamwe mamaneja emamwe mapassword anosanganisira lPassword (1 password.com) iyo inoshanda kune ako ese madhivhosi kusanganisira Windows, Mac, Android uye iOS. Inopawo webhu browser browser.
Imwe-nguva app mapassword
Kana iwe uchigonesa maviri-chinhu chechokwadi, kupinda muakaunti pane chishandiso chitsva kana chishandiso kunofanirwa kukasira kukurumidza kuti usimbise hunhu hwako, asi zvimwe zvekare zvigadzirwa uye maapplication - kusanganisira email maapplication Thunderbird uye Outlook - hazvishande zvakanaka nazvo.
Nhau dzakanaka ndedzekuti iwe haufanire kuwana yakaparadzana app kana kukanganisa kuchengetedzeka kwako - mazhinji masevhisi anopa maviri-chinhu chokwadi chechokwadi chinopa izvo zvinozivikanwa semamwe-nguva mapassword. Aya ndiwo mapassword aunogona kushandisa panzvimbo yeyakajairika password kuti upinde mune chishandiso kana chishandiso. Kana app ikaramba kushanda nemazvo kunyangwe mushure mekuisa iyo chaiyo password, edza imwe yeizvi panzvimbo.
Kana iwe uri mushandisi weGoogle, semuenzaniso, enda kuaccounts.google.com uye kusaina. Sarudza zita rako rekushandisa, wobva 'Akaundi Yangu'. Dzvanya 'Sign-in & chengetedzo', peta pasi uye tinya 'App mapassword' pasi pe '2-nhanho Verification'. Sarudza 'Sarudza app' kuti upe yako zita zita, uye chishandiso, wobva wadzvanya Gadzira. Kopa uye unama pasiwedhi mundima inoenderana (tarisa sarudzo yekuichengeta). Zvino zvese zvinofanirwa kunge zviri nani…
Chengetedza rako rewebhu kupinda mukati
Paunenge iwe waisa LastPass, bhurawuza kune webhusaiti uye pinda mukati uchishandisa iro zita rekushandisa uye password nenzira yakajairwa. Mushure mekupinda mukati, LastPass ichaburitsa green bar ichipa kuti ichengetedze humbowo hwewebsite yako. Ita kudaro, uye paunotevera kushanyira saiti, iwe uchaona bhatani reLastPass richionekwa muminda yekutumira - tinya izvi kuti uzadze ruzivo rwako nekukurumidza.
Kana password iripo iwe yaunoshandisa iri isina kusimba, enda kumisangano yeaccount yako uye tsvaga sarudzo yekugadzirisa password yako. Dzvanya bhatani diki padiki padivi peiyo password shamba kuti ugadzire nyowani password. Ive neshuwa yekumisikidza password kureba kupfuura yakasarudzika vatanhatu mavara - gumi kana anopfuura mavara anowanzo kuve akanakisa.
Dzvanya 'Ratidza Dzemhando Dzesarudzo' uye tarisa iwo mabhokisi ezviratidzo kuti uwedzere simba rako repassword kumberi. Kana ukangofara nazvo, tinya 'Shandisa password'. Iwe unozokurudzirwa kuti iro password rave kugadzirwa, saka tinya 'Hongu, shandisa ino saiti', uye chengetedza shanduko dzako kugadzirisa zvese account uye LastPass. Makorokoto! Pasiwedhi yako yanyanya kuchengetedzeka.
Maitiro Ekukoshesa Mapassword Kupinda muChannel Kubva ku CSV Faira
Chrome Password Manager: Maitiro Ekuishandisa Uye Uye Ndiro Zvese Zvaunoda?
Maitiro matatu Ekuseketa Mapasswords Akachengetedzwa Mune Firefox 3 & 57
Nzira Yokugadzirisa Inonzi Intermittent Internet Connection In Windows 10
Maitiro Ekutsvaga Akavanzika & Akachengetedza Mapassword mu Windows
Categories nzira yokuzarura faira mukati mekodhidhiki Post navigation
GoPro Hero 6 Inotengeswa Zvino Uye Inotsvaga 4K UHD Video Pa 60FPS
Kudzokorora | Intel Core i5-8600K LGA 1151 V2 CPU